Oromiyaatti tumsa ijaarsa hidha haaromsaatiif taasifamaa jiru
Oromiyaatti tumsa ijaarsa hidha haaromsaatiif taasifamaa jiru Featured
Ijaarsi Hidha Guddicha Haaromsa Itoophiyaa hirmaannaa lammiilee biyyattiitiin eegalamee adeemsifamaa jiru waggoota jaha lakkoofsisaa jira.
Haaluma ministirri muummee duraanii, Obbo Mallas Zeenaawwii wayita dhagaa bu'uuraa ijaarsa hidhichaatiif kaa'an, wantoonni ijaarsichaaf barbaachisan hundi guutummaatti lammiilee biyyattiirraa akka eegamu ibsaniin lammiileen biyyattii milkaa'ina ijaarsichaatiif waan qabaniin tumsaa jiru.
Deggarsa taasifamaa jiru ilaalchisee kabaja jalbultii guyyaa dubartoota addunyaa /March 8 barana akka Oromiyaatti wayita Magaalaa Shaashamanneetti kabajametti namoota tokko tokko haasofsiifneen turre.
Oromiyaatti, Hogganaan Waajjira Mana Marii Qindeessaa Hirmaannaa Ummataa Ijaarsa Hidha Guddicha Haaromsa Itoophiyaa, Obbo Amaan Alii akka jedhanitti, ummatni biyyattii golee arfaniinuu xiiqiidhaan gumaacha olaanaa taasisaa jira.
Haaluma kanaan waggoota ja’a keessatti akka Oromiyaatti qarshii biliyoona 1.4 walitti qabuuf karoorfamee bittaa boondiifi arjoomarraa qofa qarshii biliyoona 1.7 sassaabameera.
Kana malees qarshiin karaa ergaa gabaabaa, lotorii hidha haaromsaa, abbootii qabeenyaatiin walittiqabameefi arjoomame oggaa itti dabalamu dabalame deggarsi taasifame karooraa oli jedhu.
Obbo Amaan hirmaannaan ummatni taasisaa jiru daran kan nama boonsu ta'uu eeranii, Magaalaa Shaashamanneetti dubartiin feestaalii daldalan tokko deggarsa walirraa hincitne taasisuun hanga ammaatti bittaa boondiin qarshii kuma 52 taasisuushii akka fakkeenyaatti kaasaniiru.
Jiraattuu magaalattii biraa kan ta'an Aadde Saaniyaa Abdoo damee aadaafi turizimiitiin gurmaa'anii galii xixiqqaa haalota adda addaarraa argatanirraa hidhaa haaromsaatiif hanga humansaanii tumsaa akka jiran dubbatu. Kanaanis marsaa lamaan qarshii kuma lama arjoomuusaanii ni eeru.
Hanga hidhichi xumuramutti hirmaannaa eegalan cimsanii kan ittifufan ta'uufi walakkeeffamuu hidhichaatti daran akka gammadan ibsu.
Dorgommii miidhamtoota qaamaatiin kan beekamu Dargaggoo Abdurraahmaan Teebuu gaamasaatiin dorgommii fiigicha Hidha Haaromsaatiif galii walitti qabuuf sadarkaa biyyaafi naannootti yeroowwan adda addaa adeemsifamanirratti tumsa gochaa akka jiru dubbata.
Gara fuulduraatti maallaqaanillee deggaruuf karoora akka qabu eeree, badhaasota yeroowwan garagaraatti 1fa ba’uun argate qusatee of jijjiiraa ijaarsicharratti hanga humnasaa tumsuuf qophii ta'uu hima.
Walumaagalatti, ummanni naannichaa deggarsa ijaarsa hidhichaatiif taasisaa jiru hanga xumuraatti cimsee ittifufuun aantummaa misooma biyyaatiif qabu finiinsu qaba.
Torban kana/This_Week 17680
Guyyaa mara/All_Days 1442460